MetroNews - Home करिअर क्याम्पका विद्यार्थीले पाए जिम्मेबारी
काठमाडौं । श्रावण १ गतेबाट करिअर क्याम्पमा सहभागी भएका इञ्जिनियर र आर्किटेक्ट विधाका विद्यार्थीले महानगरको सहरी योजना आयोगबाट विभिन्न योजना तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । अहिले उनीहरुलाई वडा स्तरीय ३ करोड रुपैयाँसम्मका योजना तयार गर्न दिइएको छ । यस अघि विनियोजन भएको विकास खर्च गर्न महानगरलाई प्राविधिक तयारीको अभाव थियो । यसकारण विकास लागि पैसा हुन्थ्यो तर काम हुँदैनथ्यो । अब यो समस्या सकिन्छ, आयोगका सदस्य सचिव सरोज बस्नेत भन्नुहुन्छ — अहिले तयार गरेका योजना हामी भदौभित्र बुझाउँछौं । त्यसपछि अरु योजना निर्माणमा लाग्छौं ।
कहाँ कस्ता योजना तयार हुँदैछन्?
समूह १ सदस्यहरुले वडा नं. ७ का प्राथमिक योजनाहरुका साथमा वडा नं. ३० धोवीधाराको किरियापुत्री भवन, वडा नं. ३१ को सामुदायिक भवन र सोही वडाको जेष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रको नक्सा तयार गर्दैछन् । समूह २ का विद्यार्थीहरुले माइतीघर मण्डलादेखि तीनकुनेसम्मको पैदल मार्ग यात्रुमैत्री भए नभएको अध्ययन गर्दैछन् । ती मार्ग कति सुरक्षित छन् ? युनिभर्सल डिजाइन अनुसारका छन् कि छैनन् वा पहुँचयुक्त छन् कि छैनन्? अध्ययन गरेर सुधारका उपाय पनि देखाउनेछन् । यससँगै उनीहरुले टुँडिखेल वरपर, कोटेश्वर र सातदोबाटो क्षेत्रमा आकाशे पुलको आवश्यकता, उपयोगिता र पहुँचको पनि अध्ययन गर्दैछन् ।
यस अघि विनियोजन भएको विकास खर्च गर्न महानगरलाई प्राविधिक तयारीको अभाव थियो । यसकारण विकास लागि पैसा हुन्थ्यो तर काम हुँदैनथ्यो । अब यो समस्या सकिन्छ । सरोज बस्नेत, सदस्य सचिव, सहरी योजना आयोग, कामपा
समूह ३ मा परेका विद्यार्थीले विश्व सम्पदा क्षेत्रहरु हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भू जोड्ने सम्पदाको मार्गको खाका बनाउँदैछन् । स्थानीय जनजीवन, विद्यमान सांस्कृतिक भौतिक अवस्था, कला, संस्कार र सम्पदासँग पर्यटकीय गतिविधि बढाउने महानगरको लक्ष्य पूरा गराउन उनीहरुलाई यो जिम्मेवारी दिइएको हो । यसै समूहले महानगरको वडा नं. १ मा रहेको कमलपोखरी संरक्षण योजना पनि तयार गर्नेछ । यसै गरी समूह ४ ले वडा नं. ५ मा रहेको गहना पोखरीको संरक्षण, सोही वडामा पार्क विकास, भाटभटेनीको पाटी तथा कुमार कार्तिकेय मन्दिर पुननिर्माणको नक्सासहित योजना बनाउँदैछ ।
समूह ५ को भागमा वडा नं. १२ को पचली भैरव, द्याचलखु र बरननी पाटी संरक्षण र वडा नं. २१ को सिलखाना पार्क निर्माणको योजना भागमा परेको छ ।
उनीहरुले यो काम ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेछन् । यस क्रममा उनीहरुले, स्थानीयबासीसँग योजनाका विषयमा छलफल गर्ने, त्यस क्षेत्रको उपयोग, अहिलेको अवस्था, सांस्कृतिक सामाजिक तथा पुरातात्विक मूल्यको अध्ययन गर्नेछन् भने यस क्रममा प्राप्त भएका सुझाव समेटेर योजनाको आधार तयार गर्नेछन् । लाभ लागत विश्लेषण गरेर दिगो परियोजना तयार गर्नु उनीहरुलाई प्रदान गरिएको प्रमुख जिम्मेवारी भएको, सहरी योजना आयोगका सदस्य सचिव बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।